सत्तामा बसेर क्रान्तिकारी हुन गाह्रो रहेछ spacekhabar
सत्तामा बसेर क्रान्तिकारी हुन गाह्रो रहेछ कृष्णबहादुर महरा, सभामुख
तत्कालीन माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि बनेका अधिकांश सरकारमा शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका व्यक्ति हुन् कृष्णबहादुर महरा । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारमा उपप्रधान एवं गृह, अर्थ, परराष्ट्र र सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री भइसकेका महरा अहिले भने फरक भूमिकामा छन् । एमालेसँग पार्टी एकता हुनुअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुखको भूमिकामा पुग्न सफल भए महरा । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन नहुने बताउँदै आएको छ । उसले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एउटा पद फरक पार्टीको हुनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उठाएको संवैधानिक विषयलगायत पछिल्लो घटनाक्रमबारे सभामुख महरासँग स्पेसखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
-२०४८ साल यता संसदमा तपाईं कहिले सत्तापक्ष र कहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुभयो, मन्त्री पनि हुनुभयो र अहिले सभामुख हुनुहुन्छ । कुन भूमिका सहज लाग्यो?
यसलाई दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । जस्तो, २०४८ सालमा म सांसद हुँदा संसदले जनताको समस्या हल गर्न सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण थियो । त्यसपछि हामीले धेरै संघर्ष गर्‍याै‌ं र नयाँ संविधान बनेपछि त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भयो । अहिले संसदले जनताको समस्या हल गर्न सक्छ भन्ने मान्यता छ । त्यो संसदलाई हेर्ने दृष्टिकोण अनुरुप कुन महत्वको, कुन महत्व नभएको भन्ने कुरा निर्धारण गरिन्छ ।
दोस्रो कुरा, जस्तोसुकै दृष्टिकोण भएपनि आफूले त्यो दृष्टिकोण अनुरुप भूमिका खेल्ने भण्डाफोरको बेला त्यही भूमिका खेल्ने र अहिले अधिकतम जनताको पक्षमा उपयोग गर्न सक्ने गरी भूमिका खेल्ने एउटा संसदीय अभ्यासको कुरा भयो आफूले गर्ने क्रियाकलाप । त्यसैले समग्रमा भन्दा संसदीय भूमिकामा महत्व र कम महत्व भन्ने हुँदैन । आ–आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने पाटो अर्को हो । त्यसमा हामीले कस्तो भूमिका खेल्यौं त भन्नेले कम महत्वको मूल्याकंन हुन्छ ।
जहाँसम्म मेरो कुरा छ, अहिले संसद जनताको समस्या सामधान गर्ने उच्चतम थलो भएकाले सबै भावना, विचारहरु छलफल हुनुपर्छ, बहस हुनुपर्छ भन्ने अहिलेको धारणा छ ।
-विपक्षी बेञ्च, सत्तापक्ष वा सभामुख कुन भूमिका सहज लाग्यो ?
विपक्षी भएर सरकारलाई यसो गर, उसो गर भन्न धेरै सजिलो रहेछ । सत्तापक्ष भएर काम गर्न बडो गाह्रो कुरा हो । म त क्रान्तिकारी अभियानमा लागेको मान्छ सत्तामा बसेर क्रान्तिकारी हुन झनै गाह्रो ।
-संविधान जारी भएको तीन वर्ष असोज २ गते पूरा हुँदैछ । असोज २ गतेभित्र मौलिक हक सम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्नेछ । यसले अहिलेसम्म संसदमा प्रवेश पाएको छैन । सभामुखको हैसियतले अब तपाईं कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ?
मैले मन्त्रीहरुलाई कानुन र विधेयकहरु सकेसम्म छिटो पेश गरौं भनिसकेको छु, आउने क्रम पनि जारी छ । अब हामी दुई महिनामा यो काम गर्छौं । अहिले जहाँ जहाँ समस्या छ, जस्तो संघीय र स्थानीय प्रशासनमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन र प्रहरी परिचालन सम्बन्धी ऐन छिटो बनाउनुपर्ने छ । यसलाई हामीले पहिलो प्रथामिकतामा राखेर छलफल सुरु गरेका छौं । मलाई लाग्छ, असोज २ गतेसम्म हामी ती सबै पुरा गर्छौं ।
-तर, संविधान कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो देखियो नि !
मलाई पनि त्यस्तै लागेको छ । मैले उहाँहरुलाई पटक–पटक भनेको छु, ऐन नचाहिने भए भन्नुस्, होइन भने यस्तो नगर्नुुस् । किनभने ऐन बनाउने प्रारम्भिक जिम्मा सरकारको नै हो । ढिलो भएको छ समय पनि कम छ तर, सरकारले ल्याउँछ भन्ने आशा छ ।
-नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा सत्तापक्षीय नेताहरु नै असन्तुष्ट देखिए नि । कारण के होला?
सत्तासीन दलका नेताहरुले बजेटको आलोचना गर्नुभएको कुरा सत्य हो । रचनात्मक रुपमा आलोचना गर्नु राम्रो नै हो । त्यसले अर्थ मन्त्रालय र सरकारलाई अगाडि बढ्न मद्दत मिल्छ जस्तो लाग्छ । जुन परम्परा विगतमा पनि थियो । सांसदहरु कानून बनाउने विधायक हुन् । त्यसका साथै उनीहरु राष्ट्रिय योजना बनाउने जनताका कर्मचारी पनि हुन् । बजेट निर्माणका क्रममा उहाँहरुले भनेका कुराको सुनुवाईँ नगरी लत्याइँदा यस्तो भएको हो ।
-कयौंपटक मन्त्रीको अनुपस्थितिले संसद स्थगित हुनपुगेको छ । मन्त्रीहरुले संसदलाई नटेरेका हुन्?
म नटेरेको भन्दिनँ । तर, उहाँहरुले संसदलाई प्राथमिकतामा राख्न नराख्नुभएको चाहिँ पक्का हो । यो विषयमा मैले संसदबाट धेरै पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पनि छु ।
-प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद विपक्षीलाई दिनुपर्छ भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएकाे कुरालार्इ कांग्रेसले उठाउँदै आएको छ । यसको सुनुवार्इँ नगरेर सत्तापक्ष संसदमा निरकुंश भयो भन्ने कांग्रेसको आरोप छ नि ?
यो अदालतले कार्यान्वयन गर भनेको विषय हो । त्यसैले यो विषयमा बाहिर चर्चा परिचर्चा गर्नु हुँदैन ।
-संसदलाई मर्यादित र रचनात्मक बनाउन तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?
संसदमा अमर्यादित खालका केही घटना भएका छन् । त्यसकारण मैले सबै पार्टीका प्रमुखलाई आफ्ना सांसदलाई शिष्ट रुपमा आफ्ना कुरा राख्न भन्न मैले अनरोध गरेको छु । र, यो विषय पार्टीभित्र नै छलफलको विषय बनोस् भन्ने मेरो चाहना हो ।
-सांसदहरुलाई तालिम दिनका लागि यूएनडीपी र संसद सचिबालयबीच सम्झौता भएको छ । के सांसदलाई सरकारले तालिम दिन नसक्ने हो र ?
त्यस्तो मात्र होइन । सम्झौता सरकारले गर्ने कुुरा हो । अहिले यूएनडीपीबाट जुन कार्यक्रम आएको छ यो पनि अर्थमन्त्रालयले गरेको सम्झौता हो । यो कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत संसदमा आएको हो । त्यसैले सिधै लिने विषय त राम्रो होइन । तर, हामी सरकारमार्फत आवश्यकता अनुसार विदेशीसँग लिने कुरा इन्कार गर्न सक्दैनौं । नेपाल राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले पनि अरु आइएनजीसंगको सहकार्यका रुपमा यसलाई हेर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १४, २०७५, १०:५८:००